www.camaloow.com - News: War dag dag ah:----Ciidamada Dowlada Soamaliya Kuwa Amisom oo Sibuuxdo Ula Wareegay Magaalada .................
April 22 2018 05:12:26
War dag dag ah:----Ciidamada Dowlada Soamaliya Kuwa Amisom oo Sibuuxdo Ula Wareegay Magaalada .................
<?php </a> Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo garab ka helaaya Ciidamada Midowga Afrika ee Amisom, ayaa waxay maanta la wareegeen gacan ku heynta Degmada Waajid ee Gobolka Bakool.
Sidoo kale Ciidamada Ciidamada Dowladda iyo Amisom ayaa si nabdoon gudaha ugu galay Degmada Waajid, ka gadaal markii ay isaga baxeen Ciidamada Ururka Al Shabaab, oo aan wax iska caabin ah kala hor imaan Ciidamada Dowladda iyo Amisom.
Boqolaal ka tirsan Ciidamada Dowladda iyo Amisom, ayaa waxaa xilligaan si rasmi ah loogu arkayaa gudaha iyo daafaha ee Degmada Waajid, iyadoo daqiiqadaha soo socda ay suurta gal tahay, in ay hawlgalo ka bilowdaan Degmadaasi.
Qorshaha labada Ciidan ay ugu galeen Degmada Waajid, ayaa ahaa mid qorsheysan, waxaana laga dareemaayay Ciidankaasi, iyagoo ka feejigan weerar kasta oo kaga imaan kara Xoogaga Shabaab.
Shacabka ku dhaqan Degmada Waajid, ayaa soo sheegaaya inaanay wax dhibaato ah la kulmin Ciidamada Dowladda iyo Amisom, ayna si nabdoon ula wareegeen Degmada Waajid.
Sidoo kale waxay dadka Deegaanku sheegeen inaanay waxyeelo kala kulmin Ciidamada la wareegay Degmada Waajid, marka laga reebo xaalada Degmada oo ah mid kacsan.
Boqolaal ka mid ah dadka Deegaanka, ayaa maalmihii la soo dhaafay isaga baxaayay Degmada Waajid, baqdin ay ka qabeen in lagu dul dagaalamo.
Arbacadii iyo Jimcihii, ayay gacanta Dowladdu soo gashay Degmooyinka Rabdhuure iyo Xudur ee Gobolka Bakool, halka ay maantana la wareegtay Waajid. Al-Shabaabku waxay Gobolka Bakool kaga hareen Degmada Tayeegloow oo kaliya.
· Camaloow on March 08 2014 · 0 Comments · 268544 Reads ·
Render time: 0.03 seconds 24,947,721 unique visits